पेटको उपचारका लागि दिसा दान ! चल्दैछ नयाँ ट्रेण्ड - बडिमालिका खबर
मानवताको हिसाबले मानिसहरू आफ्नो शरीरका अंगहरू र मरिसकेपछि पूरै शरीर दान गर्नसमेत तयार हुन्छन् । रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान जस्ता दानहरूपछि अब नयाँ खालको दानको ट्रेण्ड सुरु भएको छ जसलाई दिसादान अर्थात् ‘पू डोनेसन’ भनिन्छ ।
आखिर के त्यस्तो आइलागेको हो, जसका कारण मानिसहरूलाई आफ्नो दिसासमेत दान गर्नुपरिरहेको छ ?
दिसा दानमा सहभागी हुने दानीहरूलाई Good Poo Doners तथा युनिकर्न पनि भन्ने गरिएको छ ।
दान गरिएको उच्च गुणस्तरीय दिसाबाट पेट सम्बन्धी विभिन्न समस्या भएका विरामीको पेटको प्रभावकारी उपचार गर्न सकिने दाबी गरिएको छ । यतिमात्र नभई दान गरिएको दिसाबाट डिजाइनर गट ब्याक्टेरिया तयार गरिन्छ जसले मानिसहरुका पेट सम्बन्धी समस्यालाई दूर गर्दछ ।